ဂေါက်ရောဂါအတွက် ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဂေါက်ရောဂါအတွက် ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက်
Posted by weiwei on May 6, 2011 in Health & Fitness | 11 comments
ကြုံခဲ့ဖူးတာလေး ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ ကျွန်မနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးပြောပြတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါက်ရောဂါဆိုတာ အကြောအဆစ်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရောဂါကို ရေသောက်ရုံနဲ့ ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာ လက်တွေ့ပါတဲ့ …
ညဘက်မအိပ်ခင် ရေကျက်အေးကို အရင်လုပ်ထားပါတဲ့ … သူပြောသလိုဆို 0.4 လီတာခန့်၊ မနက်အာရုံမတက်ခင် ၄ နာရီလောက်ထပြီး နောက်ထပ်ရေနွေးကျိုရမယ် … ဆူနေတဲ့ရေနွေး 0.4 လီတာခန့်ကို ညတုန်းက အအေးခံထားတဲ့ 0.4 လီင်္တာနဲ့ ရောလိုက်ပါ … ရောပြီးရင် 0.8 လီတာ အကုန်လုံးကုန်အောင် သောက်ချလိုက်ပါတဲ့ … သောက်လို့ပြီးတာနဲ့ နာရီဝက် ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး တရားမှတ်နေရမယ် …
အဲဒီလိုနည်းနဲ့ ၇ ရက်လုပ်လိုက်တာ ဂေါက်ရောဂါကျွမ်းနေတဲ့လူနာတစ်ယောက် သက်သာသွားခဲ့တာ ဆရာတော့်ကိုယ်တွေ့ပါတဲ့ …
အခုနည်းလမ်းလေးက ဘာဘေးဥပါဒ်မှာမရှိတဲ့နည်းလေးမို့ တကယ်ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်းပဲလေ … အရှုံးမရှိပါ … တရားထိုင်လိုက်လို့ အမြတ်တောင် ထွက်နိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား …
ညဖက်က လုပ်ထားတဲ့ ရေကျက်အေးကို ရေခဲသေတာထဲ ထည့်ထားလို့ရလား မဝေ။
ရောဂါအကြောင်းတွေတော့ နားမလည်ဘူး … လိုသလို သုံးလို့ရအောင်သာ ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ..
ခုခေတ်မြန်မာအစားအစာတွေက.. ကျမ်းမာရေးအတွက်… ချိန်ဆထားတာ တော်တော်ကို နည်းတယ်..။
ဆိုတော့… ဗရမ်းဗတာ စားကြတယ်တောင်ပြောရမယ်..။
တိုင်းပြည်အခြေအနေအရ.. အစားဗုံးဘောလအော မစားနိုင်လို့သာ တော်ယုံကျနေသေးတာ…။
ယူအက်စ်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာတွေ.. အစား..အသားတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်..အားရပါးရ.. နှိပ်ကြတာ..များတော့. မြန်မာတွေ.ဂေါက်ဖြစ်တာတော်တော်တွေ့ရတာပဲ..။
အရိုးအဆစ်တွေကြား… ယူရစ်အက်စစ်က..အနယ်လိုကျနေတော့… လူလှုပ်တိုင်း.. အရွတ်တွေ..အရိုးတွေပွန်းမိပြီး..သေအောင်နာကြတာ တွေ့ဖူးတယ်..။
တချို့ ဆို..ကားလီဗာတောင်မနင်းနိုင်လို့.. အိပ်ယာထဲလဲနေတာ…။
ရေများများသောက်တာက… အလွယ်ဆုံးကုထုံးလို့ မိတ်ဆွေတယောက်ပြောဖူးတယ်..။
အခု..ဝေမမ စာတွေ့တော့ အင်တာနက်ထဲကရှာတင်ပေးလိုက်တယ်..။
Drinking lots of water every day is an important part ofanatural remedy for gout. This article explains why and containsauseful tip for gout sufferers – how to easily record that they drank their daily water target. There’s no need to score every glass inanotepad or in any kind of computer.
A natural gout remedy, as with all gout treatments, requires the reduction of uric acid levels. The normal clinical target isaserum (blood) level of6mg/dL for men, less for women. Reducing uric acid to these levels often dissolves the MSU crystals which are mainly formed from uric acid. (The immune system’s reaction to these crystals is the immediate cause of pain and inflammation). Drugs such as Allopurinol (generic name) are xanthine oxidase inhibitors — Allopurinol inhibits the enzyme which is needed foramajor part of the process of converting purines into uric acid in the liver, and so less uric acid is produced. Drugs such as Probenecid (generic name) and Sulfinpyrazone (generic name) aid its excretion.
Therefore, the ”trick” in curing gout is to remove uric acid. However, there are other natural ways of assisting the removal of uric acid, and just about the most popular, to judge from views of online polls I have seen, is drinking water. How does water work? Simply becauseahydrated body will dilute uric acid and diluted uric acid is more likely to be excreted. This is the first reason why water use in gout treatment is so important.
Drinking water generally hasapH of 7.0 so it helps to raise the body pH to 7.0, or more when used in conjunction with other alkalizing agents. Occasionally you will see bottled water labels state this 7.0 value, just about the only product in the supermarket that states its pH value. Foods do haveapH value which means that some foods make the body more alkaline and some more acidic.
The quoted amount varies from 8 to 12 of 8 fl.ozs glassesaday. But perhaps the true amount for you is the amount of water you need to raise the body pH above 7.0. How can you know your pH level? pH test strips can be purchased online and delivered by mail. Type ” pH test strips” or “pH test stix” intoasearch box. Make sure you follow precisely the manufacturers’ instructions in the accompanying leaflet.
How can you be certain that you have met your daily water target?
Counting your score of water drunk every day is boring and prone to memory lapses. So use this tip. Every evening, or early in the morning, fillajug with 8 x 8 fl.ozs of water (64 fl.ozs). Alternatively, the amount you have decided on, such as two jugs each of4x 8 fl.ozs of water and4x 8 fl.ozs of juice; or one jug of 10 x 8 fl.ozs of water and so forth. Use this source to make your other water based drinks that count as water intake.
Just asahighly acidic body can suffer from acidosis, an over alkaline body can suffer from alkalosis. This causes muscle cramps and spasms among other problems. So do not over do it. As always when dealing with gout, work with your doctor, or other health care professional.
ရေကုထုံးကြားဖူးလားမသိဘူး၊ ရောဂါပျောက်အောင်ရေသောက်နည်း ၊ ဂျပန်နည်းပညာလို့ပြောတယ်၊ post တင်ပြီးပြီလားမသိဘူး၊ သိရင် link ပေးပါဦး၊
မဝေရဲ့ ဆေးနည်းအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ရေများများသောက်တာက ရောဂါတော်တော်များများကို ကာကွယ်နှိင်တယ်လို့ သိရတယ်။ ရေသောက်များတာကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့သူတော့ မရှိသလောက်ပါ။
အသဲ အဆီဖုံးတဲ့ လူ ရောဂါ ကျွမ်းနေရင် ရေများများ မသောက်ရဘူး။ ရေဖျင်းဖြစ်တတ်တယ်။ ရေတွေ ဗိုက်ထဲ ဆူဖြိုးနေရင် ဖောက်ထုတ်ရတယ် မလွယ်ဘူး သနားပါတယ်။
ရေ များများသောက်ရတဲ့ နည်းကို ၁၉၇၄ လောက်တုန်းက မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်မှာ (ရှုမ၀ လို့ ထင်ပါတယ်) ဖတ်ဘူးခဲ့ပါတယ် .. သူ ရေသောက်တာက မနက်စောစော သောက်တာရယ် .. အစာစားပြီး ၂ နာရီမှာ သောက်ရမှာရယ် နေ့လည်စာ အပြီးမှာသောက်ရပါမယ် .. ညစာတော့ မပါပါ .. အစာမစားမီ ရေ မသောက်ရ ဆိုတာ ပါပါတယ် .. ကြာလဲ ကြာပြီဆိုတော့ အသေးစိတ် မမှတ်မိတော့ပါ .. သောက်ခါစမှာ အခက်အခဲ အချို့ ရှိပါမယ် .. သောက်ပြီး တစ်နာရီအတွင်း ဆီး ၃ ခါ၊ ၀မ်း ၁ ခါ သွားပါမယ်၊ နောင် အကျင့်ရသွားရင် ဆီး ၁ ခါ ၀မ်း ၁ ခါသွားမယ်၊ ၀မ်း အကျင့်ဖြစ်သွားရင် မလိုအပ်တဲ့ ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေ ထွက်ပြီး ရောဂါ ကင်းဝေးမယ် လို့ မှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရေသောက်တာကို ၀မ်းချုပ်တဲ့အခါတိုင်း လေ့ကျင့်ဖြစ်ပေမယ့် ပုံမှန်တော့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ
မသိပါဘူးခေါင်းစဉ်စ ဖတ်လိုက်တော့ ဂေါက်ရောဂါဆိုလို့ စိတ်မမှန်တဲ့လူအကြောင်းရေးတာမှတ်နေတာ.။
လေးဖက်နာ သမား ဥ မစားရဘူးတဲ့။
တီတီတာတာပြောတတ်တဲ့ ကလီစာဆိုလဲ ဝေးဝေးရှောင်ရသတဲ့။